किन हुन्छ पिनास ? कसरी बच्ने ? – Pahilopana | Nepali News Site | Online Nepali News
किन हुन्छ पिनास ? कसरी बच्ने ?
लोचन कार्की, जनरल फिजिसियन
चिसो मौसममा रुघाखोकीसँगै मानिसमा देखा पर्ने अर्को समस्या भनेको पिनास हो । वृद्धवृद्धा तथा बालबालिका यसको उच्च जोखिममा हुन्छन् । चिसो मौसममा हुने हुने रुघाखोकीलाई समयमै निदान गर्न नसक्दा पिनास हुन सक्छ :
-टाउको र अनुहारका हाडमा खाली ठाउँ हुन्छन् । उक्त हाडमा हावा भरिएको हुन्छ । चिसोको कारण नाकभित्रको पानी बाहिर निस्किन सक्दैन र त्यस्तो पानी खाली ठाउँमा गएर बस्ने गर्छ । जसले गर्दा मानिसमा पिनास हुन्छ । सुरुमा रुघा लाग्छ र बिस्तारै यसले पिनासको रूप लिन थाल्छ ।
-पिनास हुँदा नाकमा पानी भरिनुका साथै नाक सुन्निने समस्या हुन्छ । यस्तो अवस्थामा ब्याक्टेरियाको संक्रमणसमेत हुन सक्छ ।
-पिनास भएमा टाउको दुख्ने र नाकबाट पानी बग्ने हुन्छ । बिस्तारै नाक पनि बुझिँदै जान्छ ।
-पिनासले श्वासप्रश्वास प्रणालीमा पनि असर पु¥याउँछ । पिनासकै कारण मानिसलाई सास फेर्न समेत गाह्रो हुँदै जान्छ ।
-पिनासले नाकमा मात्र नभएर शरीरको अन्य भागमा पनि दुःख दिने गर्छ । पिनास भएमा टाउकोको अगाडिको भाग निकै भारी हुन्छ ।
Previous: मेलम्ची खानेपानी सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’
Next: सुन्तला उत्पादनमा कमी
रोटरी रोट्याक्ट लेखनाथको स्वास्थ्य शिविरमा ८०० जना लावान्वीत
अब अशक्त बिरामीलाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँ भत्ता
दाँतको उपचार क्रममा रेसुङ्गा अस्पतालमा एक बिरामीको मृत्यु, लापरबाही भएको भन्दै नाराबाजी
जन्मदिमा कुष्ठरोगीलाई सहयोग
स्वास्थ्यका लागि एकदिनमा कति नुन खान ठीक
स्वास्थ्य सेवामा बिरामीको विशेष अधिकारबारे यस्तो प्रस्ताव
पतञ्जली आयुर्वेदका चार उत्पादन नेपालमा प्रतिबन्ध
२४ जेठ, काठमाडााैं । भारतका चर्चित योग गुरु बाबा रामदेवको पतञ्जली आयुर्वेदिक केन्द्रको उत्पादन विभिन्न चार प्रकार औषधि नेपालमा विक्री वितरण गर्न रोक लगाइएको छ । नमूना परीक्षणका क्रममा न्युन गुणस्तरीय तथा गुणस्तरहीन भएको पाइएपछि औषधि व्यवस्था विभागले औषधिको बिक्री वितरणमा ...